merolagani - महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा १५ प्रतिशत बढ्यो
महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा १५ प्रतिशत बढ्यो
महालक्ष्मी विकास बैंक (MLBL) ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ५ करोड १० लाख अर्थात १५.१३ प्रतिशतले बढी हो ।
गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार भएको बैंकको अपेक्षित रुपमा खुद नाफा वृद्धि भएको देखिँदैन । बैंकको कर्मचारी र सञ्चालन खर्च बढ्दा अपेक्षित नाफा बढ्न नसकेको हो ।
चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब २८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ ।
चैत्र मसान्तसम्ममा ३० अर्ब ४९ करोड ९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले २६ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ ।
यस अवधिमा बैंक खुद ब्याज आम्दानीमा उल्लेख्य रुपमा सुधार गरेको छ । यस त्रैमासमा बैंकले एक अर्ब २६ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दनी गरेको छ । गत वर्षको यसैअवधिको तुलनामा बैंकले खुद ब्याज आम्दानी २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँले धेरै हो । गत वर्ष बैंकले ७१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकले ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो गवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३२ करोड ५७ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष बैंकले १७ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात ३.८५ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ १८ पैसा छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ २३ पैसा छ ।
करिब ३ वर्षदेखि शेयर कारोबार रोक्का रहेको सहारा विकास बैंकको नाफा ३७ प्रतिशत घट्यो
संग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा साढे सात प्रतिशतले घट्यो
May 13, 2020 01:25 PM
लुम्बिनी विकास बैंकको खुद नाफा बढ्यो, ईपीएस घट्यो
May 13, 2020 08:36 AM
सिटिजन्स बैंकले एक्वायर गर्न लागेको सहयोगी विकास बैंकले पस्कियो यस्तो वित्तीय विवरण
May 13, 2020 06:18 AM
कामना सेवाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दा खुद नाफा प्रभावित
May 13, 2020 05:52 AM
इम्पेरिमेन्ट चार्ज र खर्च बढेसँगै सिन्धुको खुद नाफा खुम्चियो
May 13, 2020 04:36 AM
लोडसेडिङको अन्त्य गरेर ‘वाहवाह’ कमाएका कुलमानको निरन्तरता कि बिकल्पको खोजी ?
Jul 04, 2020 07:20 PM
लोडसेडिङको अन्त्य गरेर ‘वाहीवाही’ कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौमा सकिदै छ । अहिले प्राधिकरण भित्र र बाहिर पनि घिसिङलाई नै अर्को चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइने कि अर्कोलाई ल्याइन्छ भन्ने चर्चाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ।
शनिबार थप २३२ जनामा कोरोना संक्रमण, २६२ जना डिस्चार्ज भए
Jul 04, 2020 04:41 PM
कोरोनाका कारण थप दुई जनाको मृत्यु, मृत्यु हुुनेको संख्या ३४ पुग्यो
व्यवसायीले कर्जाको दर मात्रै सम्झन्छन्,निक्षेपको दर सम्झन्नन, निक्षेप नभइ कर्जा कहाँबाट मिल्छ?
Jul 04, 2020 01:39 PM